Google Codesearch Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Google ကငါ့ကိုဆက်ပြီးအံ့သြနေဆဲ ကျွန်ုပ်သည် Indiana နှင့် Google View တွင် Mountain View မရှိခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ယာယီနေရာချထားရေးရာထူးကိုလျှောက်ထားပါမည်။ ၏လိုင်းများတလျှောက် 37signalsဂူဂဲလ်သည်ပြidentifyingနာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ကာလ။ အဘယ်သူမျှမဖန်စီပစ္စည်းပစ္စယ ... သူတို့ရိုးရိုးကအလုပ်လုပ်စေ!
ဂူဂဲလ် Codesearch သည်သင့်အားကွန်ယက်ပေါ်မှတင်သွင်းသောကုဒ်ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် beta ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ဂူးဂဲလ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်အချို့ရှိပါသည်။
ပရိုဂရမ်မာအများစုသည် PHP၊ .NET, MSSQL စသည်တို့ကိုအထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အကြိုက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုသူအကောင့်မှသော် (သို့) cookie မှတစ်ဆင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာသည်ကောင်းလိမ့်မည်။ သူတို့မလုပ်ရင်ငါကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်လိမ့်မယ် (အဲဒီမှာ lang: php ကိုထည့်ရန်လွယ်ကူသည်) ။
မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်နိုင်သော virii သို့မဟုတ် code နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ဦး သည်လင်းနို့ကိုသင်သတိပြုမိသည်မှာသင် Key Generators တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်ဥပမာ - Winzip ။ ဒီဟာကဟက်ကာတွေနဲ့ crackers တွေအတွက်ခိုလှုံရာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့သိထားရမယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, code နမူနာများနှင့်အတူကုဒ်ရေးသားခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဆောင်းပါးများကို post ဖို့နည်းလမ်းမရှိ။ ငါထွက်ရှိ code ကိုတန်ဖိုးထားပေမယ့်ပို။ ပင်အရေးကြီးသောကြောင့်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုရှင်းပြသည်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်များကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများအောက်တွင်ရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးရှာချင်သည်၊ ရှာဖွေရေးဆောင်းပါးများအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်ရိုးရှင်းစွာအပြုသဘောဆောင်သောဝေဖန်မှုဖြစ်သည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးယဉ်ကိရိယာ၏အရေးပါမှုကိုအဘယ်နည်းဖြင့်မျှတန်ဖိုးမထားချေ။ ငါကအသုံးချစတင်ပြီးနှင့်အချို့သောအလားအလာရလဒ်များကိုပြန်လည်ရယူပါ။
Wal-Mart လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပျက်ကွက်သည်။ အကောင်းဆုံးဟာသသို့ဒေါ်လာ ၅၀!
အက္ခရာသင်္ချာနှင့်ဂျီသြမေတြီ ... မည်သည့်အချိန်၌၎င်းကိုငါအသုံးပြုမည်နည်း။ ဂူဂဲလ်မြေပုံများ!